Ahoana ny Mivavaka? | EGW Writings
Toko 78 — Ny Herin’ny VavakaToko 79 — Ny Fahazarantsika amin’ny VavakaToko 80 — Finoana sy VavakaToko 81 — Ny Lanjan’ny Fianarana ny BaibolyToko 82 — Mitrandraka ny Soratra Masina ho an’ny TenaToko 83 — Maharitra amin’ny Fianarana ny BaibolyToko 84 — Tambin’ny Fianarana Voatariky ny BaibolyToko 85 — Ny Baiboly, MpampianatraToko 86 — FanajanaToko 87 — Fanantenana Miorim-Paka
Tsy araka ny tokony ho izy ny fandraisan’ny olona ny vavaka. Tsy fampahafantarana an’Andriamanitra izay zavatra tsy fantany izany Andriamanitra dia efa mahalala ny tsiambaratelon’ny tsirairay. Noho izany dia tsy ilaina ny manao vavaka lava reny na mafy be. Mamaky ny ao am-pontsika ao Andriamanitra ka tokony hanao vavaka miafina izany isika, ary Izy izay mahita ny miafina hihaino ary hamaly araka ny fotoana sy toe-javatra mahamety izany.HAT 216.1
Ny vavaka amin’ny fihatsarambelatsihy dia faniratsirana. Andriamanitra tsy mihaino ary “tsy mamaly afa-tsy ny vavaka amin'ny fo” (Isa. 57:15).HAT 216.2
Ny vavaka dia tsy manova ny asan’Andriamanitra fa mampifanaraka antsika amin’izany. Tsy manova ny fanatanterahana ny adidy izany. Tsy mahasolo ny trosa amin’ny ampahafolony ny vavaka mivaivay sy tononina matetika. Tsy manolo ny trosantsika amin’Andriamanitra na oviana na oviana ny vavaka.HAT 216.3